Cité Andranoambo Boriborintany I Notoloran’ny CUA sy ny CDA jiro avy amin’ny masoandro
Jiro tapaka eny 67 HA Vokatry ny “cable” voakitika noho ny fanamboaran-dalana
Tapaka nanomboka ny alarobia lasa teo ny jiro teny amin’ny faritra 67 ha sy ny manodidina.
Sehatra Ifoton’ny Fananan-tany Olana hatrany ny mpanao politika
Olana lehibe ho an’ny fananan-tany ny mpanao politika sy ireo tompon’andraikitra eo anivon’io sehatra io, hoy ny fiarahamonim-pirenena mivondrona ao amin’ny Sehatra Ifoton’ny Fananantany (SIF).
Famatsiana jiro sy Rano Sempotra tanteraka ny Jirama
Ny alahady 13 sy alatsinainy 14 janoary ny rano amin’ny paompin’ny Jirama, dia kimavoka be fa naverina nampiasaina ny fantsona efa ela tsy niasa.
Fampikatsoana ny orinasa kraoma Mangataka vahaolana maika ireo lasibatra
Nanao fanambarana ireo rehetra mahatsiaro ho voatohintohina eo anatrehan’ny fampikatsoana ny orinasa kraomita Malagasy any Brieville omaly, ka mangataka ny famahana ao anatin’ny fotoana fohy ny olana.
UNFPA-Fanatsarana ny sehatra ara-tsosialy Hahazo tombony kokoa ny vehivavy
Sehatra 4 no niompanan’ny fandaharan’asa faha-7 an’ny Tahirin’ny Firenena Mikambana Momba ny Mponina (UNFPA), niarahany niasa tamin’ny governemanta malagasy,
Notokanana tamin’ny fomba ofisialy omaly ireo fitaovana manazava ny tanàna na « Plaque solaire », fitaovana manome jiro avy amin’ny masoandro,
tetikasan’ny « Association EZAKA », tao amin’ny « Cité » Andranoambo fokontany Andohatapenaka III Boriborintany voalohany kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA). Niisa 13 teo ireo « Association » teny anivon’ireo fokontany izay niasan’ny CDA (Centre de Developpement d’Andohatapenaka) no tonga nisoratra anarana. Ny 11 tamin’izy ireo ihany no nanolotra ny tetikasany ary ny 3 kosa no nahazo loka. Ny Association EZAKA no nandrombaka ny laharana faha-2 tamin’ity fifaninanana ity, ka izay indrindra no nahazoany famatsiam-bola nitentina 5 tapitrisa Ariary mba ho fanatanterahana ny tetikasan’izy ireo dia ny fanazavana ny tanànany amin’ny alalan’ny jiro avy amin’ny masoandro. Tsara ny manamarika fa niaina tao anaty haizina tanteraka ity « Cité » ity tao anatin’ny 10 taona niorenany, zary lasa nanjakan’ny tsy fandriampahalemana ka nahatonga ny fikambanana EZAKA nanatontosa izao tetikasa izao niaraka tamin’ny CUA. Araka ny nambaran’ireo mponina teny an-toerana dia faly izy ireo satria dia efa volana maromaro no nisitrahan’ireto farany ny fahazavana. Ny CDA sy ny kaominina Antananarivo Renivohitra no namolavola ny tetikasa ary ny fampiroboroboana ny fitondrana tsara tantana eny ifotony amin’ny alalan’ny fampandraisana andraikitra ny tsirairay no antony. Tamin’ity indray nitoraka ity dia ny elakela-trano no nanombohana ny tetikasa tamin’ny alalan’ny fametrahana “projecteurs” 27 manodidina ny tanàna. Mbola ho avy ny fahazavana isaky ny tokantrano tsirairay.